Karen Community Association UK: October 2011
‘‘We have been much misunderstood by our demand foraseparate Karen State. Some people misunderstand it asamanifestation of our desire to return to servitude under the British, We are not so foolish." Saw Ba U Gyi,Dinner held at the Karen National Club,9th October 1948 Saw Ba U Gyi
The Karen Community Association UK was founded in 2006 and now we have three branches in UK. KCA Bolton-Bury, London and Sheffield. The Karen Community Association represents the Karen Community in the UK. It assists the community with problems they face coming to live in the UK, raises awareness about the situation in Burma, raises money to help refugees and internally displaced people, and campaigns for action by the international community. KCA UK also aims to promote unity among the Karen and at the same time preserve and promote our culture, literature and language in UK.
Karen New Year 2750
Karen New Year 2749
ကရင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အားလုံး စည်းလုံးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းကြမည် သန်းထိုက်ဦး|
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စလိုကြောင်း တရုတ်က လေသံပစ်။
အရက်အခြေပြု မုဒိမ်းမှုဝေဆာ ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါ သမတရေ (မုိုးမခပေးစာ)
HR Groups – President Thein Sein fails to live up to his reform promises
ဘန်ချောင်းဒေသ ကရင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ ရဲ့ ဒုက္ခ (ရုပ်/သံ)
Adventist World Radio (Sgaw and Pwo Karen)
ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းမီးလောင်၍ သေဆုံးသူ၃၀ထဲမှ ကလေးများပါဝင်
တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီမှ မောင်မယ် သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ
မန်းရောဘတ်ဘဇန်မှ ဗိုလ်ချုပ်ဂျော်နီထံသို့ ပေးစာ
ဖမ်းဆီးခံရသည့် KNLA ဆေးမှူး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရန် ဥရောပ ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ ကြေညာ...
ကျွန်မ ပြောနေတာ အီးမေးလ် နော်၊ ဂျီမေးလ် မဟုတ်ဘူး
တိုင်းသားသားများ စုရုံးပြီး မလေးရှားမြန်မာသံရုံးရေ...
KNDO ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးဆာ့ကလယ်မူး ...
Life Without Identity
KIA ၏ တိုက်ပွဲ မှတ်တမ်း ရုပ်သံ
25 Oct 2011 စောသိန်းမြင့်(ကေအိုင်စီ)
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် သောင်ရင်းမြစ်တွင် အစိုးရစစ်တပ်နှင့် BGF တပ်ဖွဲ့တို့၏ ဖမ်းဆီးမှု ကို ခံခဲ့ရသည့် KNLA ဆေးမှူးမှာ ယမန်နေ့က ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသည်ဟု KNLA က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၈ရက်နေ့မနက်က မဲ့သဝေါဂွင်ရှိ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် BGF တပ်တို့ ထိုင်းဘက်ခြမ်းကူးကာ သောင်ရင်းမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိ KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ချိန် မြစ်အတွင်း ပိုက်ထောင်နေသည့် ၎င်းဆေးမှူး စောစေးလယ်ထူး ၃၇နှစ်အား ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
စောစေးလယ်ထူး၏ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက “သူ့ကို သတ်ပစ်ဖို့အတွက် ဗမာစစ်တပ်က ပြောဆိုနေသံကို သူ ကြားမိသွားလို့ နောက်နေ့မနက်စောစောမှာ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာပါ။ သူပြေးတဲ့အချိန်မှာ ဗမာစစ်သားတွေက နောက်ကနေ သေနတ်နဲ့ လိုက်ပစ်သေးတယ်လို့ ပြောတယ်။”ဟု ဆိုသည်။
ထိုသို့ထွက်ပြေးလာရာ တောလမ်းတနေရာတွင် ထောင်ထားသည့် မြေမြှုပ်မိုင်းတစ်လုံးကို နင်းမိကာ ညာဘက်ခြေဖနောင့်မှာ အနည်းငယ် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အစိုးရစစ်တပ်နှင့် BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့သည် စောစေးလယ်ထူးအား ဖမ်းဆီးခဲ့စဉ်က ထိုးကြိတ်၊ ရိုက်နှက်ကာ စစ်ဆေးမေးမြန်း ခဲ့သည်ဟု ၎င်းအား ကိုယ်တိုင်သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သူတစ်ဦးက “သူ့ဦးခေါင်းနောက်စေ့ကို သေနတ်ဒင်နဲ့ အထုခံရတယ်။ နောက်ပြီး သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားတော့ လက်နှစ်ဖက်က ကြိုးချည်ရာတွေ အခုထိ ထင်းထင်းကြီးပဲ ပေါ် နေတယ်။”ဟု ပြောသည်။
အစိုးရစစ်တပ်က ၎င်းတို့ ဖမ်းဆီးရမိသော စစ်သုံ့ပန်းများကို ယင်းသို့ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတကာ စစ်သုံ့ပန်း ဥပဒေ ချိုးကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သည်ဟု ကေအဲန်ယူ၏ ဒုဥက္ကဌ ပဒိုဒေးဗစ်သကဘောက ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရန် ဥရောပ ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်
RFA 2011-10-17မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဥရောပ ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ EPCB အနေနဲ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀ လောက် လွှတ်ပေးတာကို ကြိုဆိုပေမယ့် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး လွှတ်ပေးပြီး တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း မနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီိလို အခြေအနေတွေကသာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြေရှင်းဖို့ စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးအတွက် ပထမ ခြေလှမ်း ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးပုံဟာ အရင် ၁၉၉၂ ခုနှစ် နအဖ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အာ ဏာရှိခဲ့စဉ်က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမား တချို့ လွှတ်ပေးပြီး အများစုကို ဆက်လက် ထောင်ချထားပုံနဲ့ တူညီနေတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒီလိုနည်းနဲ့တော့ ဥရောပ သမဂ္ဂ EU နိုင်ငံတွေရဲ့ သံတမန်ရေးနဲ့ စီးပွါးရေး ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားအောင် လုပ်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့လည်း ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာ့အရေး ဆိုင်ရာ ဥရောပ ပါလီမန် အမတ်များ အဖွဲ့ EPCB ရဲ့ ကြေညာချက်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ အတွက် ထောက်ခံတဲ့ အကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗြိတိန်ဌါနခွဲ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖမ်းထားတဲ့သူ ပြန်လွှတ်ပေးပြီး အပေးအယူ လုပ်ပြီးတော့ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို လျှော့ပေးစရာ မလိုတဲ့ အကြောင်း၊ တကယ်တော့ သူတို့ လုပ်ပေးရမှာက အားလုံးကို လွှတ်ပေးမယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို မတရား နှိပ်စက်ပြီး လက်နက်နဲ့ အကြီးအကျယ် တိုက်ခိုက်နေတာ၊ မုဒိမ်းမှုတွေ ကျူးလွန်နေတာ အားလုံး ရပ်စဲပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒါတွေ လုပ်မပေးဘဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် သွားနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ယုံကြည်နိုင်စရာ မရှိတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က အာအက်ဖ်အေ ကို ပြောပါတယ်။ EPCB ရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံး လွတ်မြောက်ရေးဟာ EU ဥရောပသမဂ္ဂ နဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အဓိက ဦးစားပေး ကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပါရှိပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ ဦးဇာဂနာ (ဓာတ်ပုံ - YPI)
ဇာဂနာနဲ့ အင်တာဗျူး by dvb entertainment
တိုင်းသားသားများ စုရုံးပြီး မလေးရှားမြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
KNDO ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးဆာ့ကလယ်မူး ဈာပနပြီးစီး
အောက်တိုဘာလ ၁၁ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)ကရင်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(KNDO)၏ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးဆာ့ကလယ်မူး ၆၃နှစ်သည် အောက်တိုဘာ လ ၇ရက်နေ့ညက နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ၎င်း၏ဈာပနကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တနေရာတွင် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
၎င်း၏ဈာပန အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၁၀ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီအချိန်တွင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်၏ အစဉ်အလာအရ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကေအဲန်ဒီအိုခေါင်းဆောင်များ၊ ကေအဲန်ယူခေါင်းဆောင်များ၊ မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်တချို့ အပါအ၀င် လူ ပရိဿတ် ၅၀၀ခန့် တက်ရောက် ဂါရ၀ပြုကြသည်ဟု ကေအဲန်ဒီအို အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောသည်။
စောဆာ့ကလယ်မူ့သည် ပဲခူးတိုင်း ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ မူသယ်ကျေးရွာတွင် စကော်ဖိုးလှနှင့် နော်ဝေဖေါ တို့မှ ၁၉၄၈ခုနှစ်က မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်းမောင်နှမ ၆ဦးအနက် စတုတ္ထမြောက်သား ဖြစ်သည်။
သူသည် ညောင်လေးပင်ခရိုင်တွင် အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်း သတ္တမတန်း အောင်မြင်ပြီးနောက် အသက် ၁၅နှစ်အရွယ်တွင် ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၃)နယ်မြေ၌ စတင် စစ်မှုထမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၃ရက်နေ့တွင် KNDO ၏ ဒုတိယ စစ် ဦးစီးချုပ်တာဝန်ကို ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
KNDO ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးဆာ့ကလယ်မူး ကွယ်လွန်သွားသောကြောင့် KNDO တပ်ဖွဲ့သာမက ကရင့်တော်လှန်ရေးအတွက် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု နှစ်ပေါင်းများစွာ တွဲလုပ်ခဲ့သည့် KNDO ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူးရစ်ချတ်က ပြောသည်။
“ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ကွယ်လွန်ပြီဆိုရင် အဖွဲ့အစည်းတခုကိုကော တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးအတွက်ပါ အများကြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတစ်ခုပါ။ အခု သူက ကျနော်တို့ KNDO ရဲ့ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် တာဝန်ယူထားတဲ့အတွက် သူ့ကို နှမြောပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူး။ အမျိုးသားအတွက် သူ တာဝန်ကျေပွန်သွားပြီ။”ဟု ပြောသည်။
သို့သော် မပြီးဆုံးသေးသည့် အမျိုးသားရေးတာဝန်ကို ကျန်ရှိနေသော ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရဲဘော်ရဲဘက်များက ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ရအုံးမည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
KNDO ၏ ဗဟိုလုံခြုံရေးမှူး ဗိုလ်မှူးရှဲကလူက “အဘိုး ဆာ့ကလယ့်မူးဟာ ရုံးလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကို ရုံးထိုင် မှူးနဲ့ လက်တွဲပြီး တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။ အဲဒါကြောင့် အခု သူ ဆုံးသွားတဲ့အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ KNDO အဖွဲ့ အားနည်းသွားသလို စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျဆင်းမှုလည်း အများကြီးဖြစ်စေတယ်။”ဟု ပြောသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးဆာ့ကလယ်မူး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးနှင့် သမီး ၆ဦး၊ သား ၂ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
တိုင်းသားသားများ စုရုံးပြီး မလေးရှားမြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ
ယနေ့မနက် (၁၀း၁၅)အချိန်တွင် အင်အား(၃၀၀)ခန့် ရှိသော ကချင်၊ ကရင်နီ၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ သျှမ်း၊ ရခိုင် စသော တိုင်းရင်းသားများစုရုံးပြီး ဂျလမ်အမ်ပမ်း၊ ကွာလာလမ်ပူမှာရှိသော မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် (၁)နာရီ ကျော် ကြာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာပြည် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ သျှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုဒေသများတွင် စစ်တပ်အလုံးအရင်းဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်မှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ အပြစ်မဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကို လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုကင်းမဲ့စွာ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်များအား အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း၊ စစ်မြေပြင်တွင် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများကို လက်နက်ခဲယမ်း ထမ်းခိုင်းခြင်းနှင့် မိုင်းရှင်းကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းစသော လူမဆန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများ ရှိနေဆဲကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးစီးဦးဆောင် သူ MKO ဥက္ကဋ္ဌ မန်းစိန်သန်းက ဆိုပါသည်။ ဆက်လက်၍ မန်းစိန်သန်းကြ မြန်မာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကနေ ယခုကြံ့ဖွံ့အစိုးရသစ်အထိ တိုင်းရင်း သားတွေကို အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်ပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ချတယ်၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေ လူမဆန်စွာ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုကျင့်တယ်။ ဒီလို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက် မှုတွေ ရှိနေသရွေ့တော့ နောက်နောင်လည်း ဆက်လက်ဆန္ဒပြပြီး တောင်းဆိုသင့်တာကို တောင်းဆိုရမှာ ဖြစ်တယ်။ဋ္ဋဋ္ဋ ဆိုပြီး ပြောသွားပါသည်။
- ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် စစ်ရေးအရ ထိုးစစ်ဆင်နေမှုများ ချက်ချင်းရပ် တန့်ပေးရန်။- နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ (UNFC အဖွဲ့အစည်း)နှင့် အမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်။- နှစ်ရှည်လများ ထောင်ကျခံနေရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန်။- ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းအား (လုံးဝ) ရပ်ဆိုင်းပေးရန်။- သံလွင်မြစ်စီမံကိန်းများ ချက်ခြင်းရပ်တန့်ပေးရန်။စသော အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။
a film about two million migrant workers from Burma in Thailand
Life Without Identity -afilm about two million migrant workers from Burma in Thailand from OH Production House on Vimeo.
Labour organization estimate that there are2million migrant workers in Thailand. 75% are from Burma and Karen, Shan, Kachin. A song from our heart Shan Youth Power
Calling for peace and democracy in Burma
This isasong from our hearts
This isasong with hopes.
This isasong from poor boys, to let you know. Oh my lord where are you?
Can you see what is happened in your world?
Some live in peace and justice.
Some live in mess and sufferred.
Some abuse human rights.
Are we the same human being?
Lord of the world, can you help?
Let’s us be human being, like other please.
We can stay without home.
We can live without land.
But we can’t live without rights without freedom.
KIA/O Padang Lu SumLa Hkrung from Shanghtin on Vimeo.
ဖမ်းမိသည့် သုံ့ပန်းများ၏ ပြောဆိုချက်အရ ၎င်းတို့မှာ ခလရ ၂၁ မှ ဗိုလ်ကြီးထွန်းထွန်းဝင်း (ကြည်း – ၃၆၈၂၉)၊ ဗိုလ်ဇော်ရဲထွန်း (ကြည်း – ၅၆၈၄၄) နှင့် တခြား တပ်သား ၂ ဦး ဖြစ်သည်။
သုံ့ပန်းတို့ကို မေးမြန်းနေစဉ်မှာ ပစ်ခတ်သံများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
KIA သည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်ခံနေရသည်။
သိမ်းဆီးရမိသည့် ပစ္စည်းများကို လေ့လာနေသည့် KIA ခေါင်းဆောင်များ အရာရှိများ
ခလရ ၂၁ မှ ဗိုလ်ကြီးထွန်းထွန်းဝင်း (ကြည်း – ၃၆၈၂၉)
ဗိုလ်ဇော်ရဲထွန်း (ကြည်း – ၅၆၈၄၄) Posted by